Misokatra indray ho an'ny mpankafy ny HVAC ao amin'ny Arenas Discovery Hospital ary zavona teatra
Rehefa nanambara ny Phoenix Suns tamin'ny 2019 fa handany $ 230 tapitrisa hanamboarana ny kianja izy ireo, mpankafy sosialy 1.500 feno olona dia tsy nanantena hisokatra intsony. Na izany aza, rehefa nisoratra anarana tamin'ny alàlan'ny fidirana nanavao ny tranoheva ny mpanatrika tamin'ny volana 11 volana 11 taorian'ny nialàny ny toerana, “tena mahaliana tokoa izany,” hoy i Ralph Marchetta, filoha lefitra zokiolona Suns ary tale jeneralin'ny toerana. “Ho antsika rehetra, raharaha lehibe io.”
Ny Phoenix Suns Arena dia manana seza mainty lehibe kokoa, jiro amin'ny fomba teatra ary tabilao misy sary enina heny mihoatra ny teo alohany. Ireo singa ireo dia efa nomanina. Saingy ny fotoana fananganana dia midika fa ny Masoandro dia afaka manampy mora foana koa ireo fanavaozana mifandraika amin'ny areti-mandringana. Ny rafitra HVAC vaovao dia misy sivana MERV-13, izay misambotra sombin-javatra betsaka kokoa noho ny teo alohany. Ny fitaovana fanadiovana Ultraviolet dia nampiana ireo lalandrà escalator. Atao tsy misy ifandraisana ireo fitaovana fandroana, fa tsy trano vola kosa ireo trano fivarotana.
Na dia nanala ny tahotra efa hatry ny ela ny olona aza ny fikarohana fa matetika dia miely ambonin'ny tany ny COVID-19, dia nilaza i Marchetta fa ny fanaovana izay hahatsapana ho voaro ny mpankafy rehefa miverina izy ireo dia saika manan-danja tokoa amin'ny fiantohana ny fahasalamana. Ny valim-panadihadiana iray nataon'i Sportico dia nahatsikaritra fa raha ampitahaina amin'ny areti-mifindra, mpankafy maro (indrindra ny tanora) no manantena handray anjara amin'ny hetsika maro hafa aorian'ilay areti-mandringana. Na izany aza, tamin'ny tenin'i Marchetta, taorian'ny niainany ny “taona manimba”, tombanana ho very $ 30 miliara ny orinasan-javatra eny an-toerana, ary tsy noraisin'ny mpandraharaha izany. Roa ambin'ny folo volana taorian'ny nanidiana ny tontolon'ny fanatanjahantena, ny fampiharana teknolojia azo ampiharina, ny drafitra afovoany ary ny aingam-panahy kely avy amin'ny sehatry ny fitsaboana dia manampy azy ireo hiverina amin'ny lala-mahitsy. Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny antsasaky ny NBA no mivarotra tapakila.
Tamin'ity fotoana ity herintaona lasa izay, Ed Bosco, talen'ny fahefana injenieran'ny ME Engineers, dia nandinika ireo vokatra vaovao mifandraika amin'ny COVID isan'andro. Ankehitriny, mitsiky izy, manontany momba ny vokatra famonoana otrikaretina miorina amin'ny ion izay ampiasaina amin'ny sambo fitsangantsanganana matetika, toy ny hoe io no hianjera amin'ny mpanjifa mpitantana ny fanamboarana ny volana aprily lasa teo. Raha tsy mandaitra izy io dia hipoitra ny zavona sy ny famafazana be dia be fa tsy mety. Ny scanner mifototra amin'ny mari-pana dia manana vinavina mialoha, saingy tsy nahatratra ny ambaratonga.
Ny toerana misy teti-bola lehibe kokoa dia afaka mampiasa vola amin'ny sprayers elektrika, scanner mandrefy ny fiainana, na ny efijery izay mampifandray ny olona ao an-trano, fa noho ny tombony azo amin'ny fahalavoana maimaim-poana dia zava-dehibe foana ny tahan'ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola.
Nilaza i Bosco fa nitondra fanamby ihany koa ny orinasam-pividianana tamin'ny taon-dasa, niakatra enina heny ny vidiny ary niandry 20 herinandro mahery. Ny vondrona fanatanjahantena koa dia mailo amin'ny fameperana ny famatsiana hopitaly. Rehefa mampiasa fitaovana mitovy hanaovana sarontava dia sarotra ny mahita sivana avo lenta. Talohan'ny nisokafan'ny US tany New York tamin'ny volana aogositra lasa teo dia tsy nahita sivan-drivotra ambony indrindra i Bosco, afa-tsy ny lisitra namboarina niverina tao Connecticut miaraka amina gasket napetraka eo amin'ny ilan'ny sivana. Nanapa-kevitra i Bosco fa mety hiasa izany ary hanangana ivon-tsivana rivotra 57 manodidina ny sivana HEPA. Mbola ampiasaina ao amin'ilay fotodrafitrasa izy ireo. Hoy i Bosco: “Io no rivotra madio indrindra any New York City.”
Nanampy i Bosco fa amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny vahaolana teknolojia ambany dia nandresy tamin'ny tsena. Hita fa matematika kokoa ny fisokafana fa tsy olana ara-tsiansa. Izy io dia afaka manisa ny isan'ny olona afaka mandray azy ireo nefa mitazona halavirana azo antoka. Matetika, 25% ny fahafahan'ny famokarana no manaporofo fa izy no hany klioba NBA nahatratra ity tokonam-baravarana ity izao. Ny tarehimarika manan-danja iray hafa dia antsoina hoe ny fifanakalozana rivotra isan'ora (ACH) na ny tahan'ny rivotra miditra any ivelany.
HKS Architects (60% amin'ny orinasan'izy ireo dia avy amin'ny sehatry ny fahasalamana) dia efa mahay antontan'isa, izay mandrefy ny haben'ny rivotra miditra ao amin'ny efitrano iray mizara ny haben'ny habaka. Ny paroan'ny hopitaly sasany dia mety hahatratra 20 ACH, raha ny kianja iray dia mety latsaky ny enina. "Miasa amin'ny fitsaboana avokoa isika rehetra," hoy i Mike Drye, talen-tsekoly ary mpanao mari-trano. “Ny ankamaroan'ny zavatra nataonay… dia nanomboka niely tamin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao.”
Faritra maro no miantoka ny fiasa ara-dalàna ny rafitra HVAC misy azy ireo. Hoy i Bosco: “Mandinika tsara an'ireo trano ireo izahay, matetika raha vao miorina voalohany.” “Matetika izahay manangana trano, manamafy ny zava-bitany, ary mihevitra fa hijanona tsy miova ny fampisehoana rehefa mandeha ny fotoana. Miova. ” Ny fanamboarana natao tamin'ny taon-dasa satria tsy natory ilay trano dia tokony hitarika amin'ny fitsitsiana angovo maharitra ihany koa. Amin'ny farany, na eo aza izany, misy ny fifanakalozana eo amin'ny fampandehanana ny rafitra hanamafisana ny fivezivezin'ny rivotra sy ny fitazonana ny fepetra marina sy / na ny vidin'ny angovo. Amin'io lafiny io, ny famaliana ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny dia mety hampitombo ny voina amin'ny toetr'andro rahampitso.
Raha ara-bakiteny, efa nisy nandritra ny taona maro ny vokatra iray nodinihin'i Bosco. Hatramin'ny taona 1999, Grignard, orinasa simika manana tantara efa ho 60 taona, dia namokatra fitaovam-pamokarana mahery vaika, ary maro ny kianja NBA no nampiasa ranon-javatra tamin'ny endrika zavona, izay manimba ny maso mitanjaka eny amin'ny rivotra. Mitanjaka, fa hanatsara ny vokatry ny jiro. Tao amin'ny 2015, fantatr'i Grignard fa ny fananana dia manana toetra mampiavaka ny bakteria.
Hatramin'ny volana aprily lasa teo dia nanandrana ny vahaolany manoloana ny virus iray mitovy amin'ny COVID-19 izy ary nahitana valiny azo antoka. Ny dokotera avy amin'ny University Harvard sy ny University Johns Hopkins dia nanao fikarohana bebe kokoa. Hoy ny tale jeneraly, Etienne Grignard: "Vaovao ilay fampiharana, saingy misy fampisehoana 100 tapitrisa tsy misy trangana fahasalamana." “Nampiasa ny vokatra tao amin'ny kaonseritra, seho Broadway ary fiangonana ny olona nandritra ny 20 taona mahery. “Ny andrana vao haingana dia nahitana fa ny fampidirana an'io simika io amin'ny rafitry ny HVAC dia mety hahomby, izay latsaky ny $ 1.000 isaky ny mandeha. Grignard dia nankatoavin'ny EPA hampiasaina amin'ny faritra sasany any Georgia sy Tennessee ho an'ny fanombanana bebe kokoa. "Tsy vovoka angano ity vokatra ity," hoy i Griyard.
Na vokatra toa an'i Grignard na fotoana hamenoana ity trano ity fotsiny dia mety hisy ny fanavaozana maro be tamin'ny taon-dasa, ao anatin'izany ny fomba fihenam-bidy notsorina, ary na ny fampiharana iray aza milaza amin'ny mpankafy ny tsipika fandroana fohy indrindra. Nilaza i Derry fa ny kianja dia mety tsy maintsy manaraka ny kaody pandemika amin'ny ho avy ihany koa ary manome drafitra toy ny haintrano, rivodoza na famindran-toerana lehibe. Ny andro maizina indrindra amin'ny COVID-19 dia mety nandalo, fa ny eritreritra mifantoka amin'ny fahasalamana dia tsy hanjavona.
Kenny Moore dia nandany efa-bolana niaraka tamin'ny Patriots tamin'ny 2017, fa nilaza kosa izy fa ny fotoanany tany dia saika nahatonga azy hiala amin'ny baolina kitra tanteraka.
Fampindramam-bola AI manokana, fomba fampindramam-bola notsorina, fanamarihana 1 segondra, fankatoavana amin'ny fotoana tena izy, famindrana vola amin'ny andro mitovy! Ny mpanjifa vaovao dia nankatoavina tamim-pahombiazana handray valisoa $ 3,800!
Simona Halep, laharana fahatelo manerantany, dia nilaza fa ny fahalianany amin'ny volafotsy dia lehibe lavitra noho ny filaharana. Hifantoka amin'ny Grand Slam sy ny Lalao Olaimpika izy satria manantena ny korontana noho ny COVID-19 amin'ity taona ity. Amin'ny taona 2020, hampiakatra ny kabinetra amboarany manokana izy io. Ilay Romanianina 29 taona dia iray amin'ireo vehivavy manan-talenta amin'ny Miami Open. Ity no lalao voalohany Halep tany Etazonia hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Niala tamin'ny volana aogositra izy noho ny antony ara-pahasalamana sy fiarovana. US Open. fiheverana. "Ho ahy, ny tanjona dia fitsapana goavana, raha azo atao ny mahazo slam lehibe indray", hoy ny laharana voalohany manerantany.
Taorian'ny nandreseny ny Masoandro tamin'ny isa 42 dia nanjary mpifaninana matanjaka ho an'ny voninahitry ny rookie tsara indrindra i Anthony Edwards.
Misoratra anarana amin'ny fiantohana fiainana "Huijiabao" ary mandraisa anjara amin'ny HSBC Insurance Well + hahazoana ny Apple Watch farany misy salan'isa 9000 isan'andro!
Ekipa mpivady tanora roa avy any Russia no hahazo ny Tompondaka amin'ny World Skating Championship izay mety hampitsahatra ny haintany medaly volamena valo taona.
Araka ny tatitry ny ESPN, niantso an'i Jared Goff i Sean McVay ary nieritreritra fa mila milalao lalao lavorary ho an'ny QB.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny media sosialy dia nanjary sehatra ho an'ireo mpisoloky mba “hihira entana be dia be”. Ireo mpisoloky dia nilaza fa tsy misy toro-hevitra momba ny fampiasam-bola ao anatiny nomen'ny manam-pahaizana, mandresy lahatra anao hividy stock sasany mora sakanana, mba ahazoana tombony be.
Rory McIlroy (Rory McIlroy) dia namirapiratra tamin'ny lalaon-dalao ara-teknikan'ny World Golf Championship-Dell, raha tsy nety ny servisy tamin'ny tee.
Ny tsenan'ny varotra Kyle Lowry (Kyle Lowry) dia hamaritra ny fe-potoana farany fifanakalozana NBA amin'ity taona ity, mihamafana hatrany ny raharaha. Adam Hermann
Ny premiumed fihenam-bidy dia $ 158 fotsiny, ary afaka mangataka $ 300 feno ianao, izay afaka manampy anao hampihena ny fividiananao vokatra fitsaboana. Azonao atao ny mitaky azy io na eny amin'ny magazay fivarotana vokatra sy fikarakarana manokana aza!
Niditra tao amin'ny vavahady famindrana ny alarobia lasa teo i Jack Hoiberg, mpandeha an-tsehatra State State, Jack Hoiberg. Afaka manao zavatra mitovy bebe kokoa ve ny Sparta?
Ity hadalana martsa ity dia tsy azo vinavinaina hatrizay. Ao amin'ny Sweet 16 amin'ny Men's NCAA Tournament, hitohy ve izany korontana izany?
Mividiana akanjo, hatsaran-tarehy na vokatra ara-pahasalamana mahasalama ho an'ny vehivavy hahazoana akanjo fanandramana Atelier Cologne, midira izao hijerena ireo tombontsoa miantsena voafetra. Fandefasana maimaimpoana ho an'ny vokatra hatsaran-tarehy. Serivisy fanaterana andro mitovy. Fiverenana sy fifanakalozana maimaimpoana 7 andro. Miankina amin'ny fepetra sy fepetra
Ny voa amerikanina, Bryson DeChambeau sy Justin Thomas ary tompon-daka Grand Slam inefatra Rory McIlroy dia isan'ireo resy nandresy tamin'ny WGC Sunday Championship.
Midira amin'ny HSBC Premier Banking, mamela ny zanakao hiaina serivisy manokana sy tombontsoa manokana miaraka aminao, ary mankafy valisoa arahaba 17,300. Miankina amin'ny fepetra sy fepetra.